I-china ngokwezifiso umbala wokuphrinta ikhofi we-350g ikhadi elimhlophe iphepha elingaphandle lomkhiqizi nomhlinzeki | I-Huaguang
Ibhokisi Lekhadi Lekhofi
Usayizi: 17 * 8 * 3.5cm
Uhlobo Lwamaphepha: ikhadi elimhlophe
Okufakiwe Yekuchumana: 50 PC ku polybag noma imfuneko sakho
Ubuningi (Amabhokisi) 1 - 5000 5001 - 50000 > 50000
Imotod ibhokisi ukupakisha kusetshenziswa kabanzi. Isibonelo, embonini yokudla, kukhona imoto yekhofid amabhokisi, imoto kamaskandid amabhokisi, imoto yamakhukhid amabhokisi nokunye. Imboni yobuhle ingaphezulu, njengebhokisi lamakhadi e-lipstick, ibhokisi lekhadi lesifihla,i-toner ibhokisi lamakhadi njalonjalo; Kukhona nemboni yezicathulo nezingubo, njengamasokisi, izingubo, izingubo zangaphansi nokunye. Uma kuqhathaniswa nebhokisi lesipho, ibhokisi lekhadi lishibhile, futhi ibhokisi lekhadi lingasongwa, okusindisa kakhulu izindleko zokuhamba. Futhi ibhokisi lamakhadi lifana nebhokisi lesipho ngokwakhiwa, ikhwalithi nokubukeka. Namuhla, ake sabelane ngamabhokisi amahle wamakhadi:
1. Amabhokisi wamakhadi angenziwa futhi abe amabhokisi ezipho, kusetshenziswa amakhadi amhlophe angama-400g, ukuphrinta kwemibala emine, i-UV engakhethi, ifilimu le-matte elimboza ingaphezulu, ibhokisi lokusika lonke, ibhokisi lokugoqa uphawu lokumaka, uma kuqhathaniswa namabhokisi ezipho zekhadibhodi. kuyafana, kepha kuzizwa kwehlukile.
2. Ukupakisha kwebhokisi lamakhadi okudla, izinto ezihlanganisiwe zokuvikela imvelo, ama-gramu angama-350 ephepha elikhethekile lekhadi lokudla, ifilimu le-matte, akukho okunamathiselwe, elingasongwa libe ibhokisi, asikho isidingo sokukhathazeka ngebhokisi elizongcolisa ukudla.
3. Amagremu angama-350 ekhadi elimhlophe, ukuphrinta kwemibala emine, ingaphezulu lefilimu le-matte, ngemuva kokugoqeka kungaba ibhokisi lekhadi le-polygonal, vula ikhava yebhokisi ukuze ufake ushukela ojabulayo, oyimfashini futhi omuhle.
4.Ikhadi elimhlophe elingu-300g, ukuphrinta kombala okusobala + ukuphrinta kwemibala emine, ngemuva kokwenza ifilimu okusika, ifilimu ye-matte ebusweni, ngesibambo sebhande
5. 350 amagremu wephepha le-powder, ukuphrinta kombala we-CMYK +2 pantong, isiliva elishisayo lendawo + i-convex yendawo, umuzwa wokuzwana okungalingani, nangaphezulu kuka-oyela oguqukayo, akukhathalekile ngombala nokuthungwa, kukhombisa ngokusobala imikhiqizo esezingeni eliphezulu futhi ukunambitha; faka nge-1mm lukathayela wephepha we-pantong wokuphrinta umbala phansi, ngemuva kokusika ukulungisa umkhiqizo.
6. Amagremu angama-300 ekhadi elimhlophe, 2 ukuphrinta umbala we-pantong + ukuphrinta umbala we-CMYK, ukuphrinta kombala okunemba okuphezulu, ngeke kwehlise ukubukeka kwebhokisi; I-UV Yasendaweni, igqamisa izici zomkhiqizo, ubuso obumbozwe ngefilimu le-matte, ebhokisini ngemuva komoya ophezulu.
7.Ibanga lemvelo lekhadi elimhlophe elingu-300g, ukuphrinta okungu-3 kwepantong + ne-CMYK, umbala ogqamile ngeke ube umbala oyingxenye, ulwelwesi olungaphezulu nge-UV yendawo, bonisa izici zomkhiqizo, ikhava yangaphakathi enefilimu ethintwayo, ngemuva kokugoqana ebhokisini kuhlanzekile futhi kunempilo ngaphandle kokulahlekelwa ubuningi.
8. Amagremu angama-300 ephepha le-powder, 2 umbala we-pantong + wokuphrinta we-CMYK, ukuqinisekisa ukuthi umbala wokuphrinta ucacile hhayi umbala wokuchema, i-LOGO iphuma ngemuva komphumela osobala ngokwengeziwe, nge-pantong color layout layout yokuphrinta ukufaka okonakele ukulungisa umkhiqizo, ukuthuthukisa Izinga lomkhiqizo, ngemuva kokulaminetha ukusika, ibhokisi lomkhiqizo lokugcina.
9. Amagremu angama-300 ekhadi elimhlophe, hhayi amancane, ifilimu le-matte lokuphrinta le-CMYK, elihlala isikhathi eside futhi elingalimazi kalula, ekugcineni lifa lisikiwe ebhokisini lenduku.
Amagremu ayi-300 ekhadi lesiliva le-matte, gxuma ungqimba wenkino emhlophe (indawo yangakini ayidingi ukuphrinta inki emhlophe), nombala we-CMYK wokuphrinta + 2 we-pantong, ukuqinisekisa ibhokisi lombala ofanayo, no-oyela oguqukayo, yenza isiliva umbala wezingxenye zebhokisi zokukhanya okukhanyayo, i-LOGO hot flash silver, esimweni sokukhanya, imibala ekhanyayo ekhanyayo, ekugcineni ifa isika ebhokisini, imikhiqizo elungisiwe enokufakwa okumhlophe ngaphakathi.
11.400 g ikhadi elimhlophe, ukuphrinta kombala we-CMYK +2 pantong, ukuqinisekisa ukuthi umbala webhokisi awukhethi, ubuso obumbozwe ngefilimu le-matte, i-flash UV yendawo, ezinye izindawo zenza umphumela we-convex, umumo webhokisi ihloniphekile futhi yinhle, iyavumelana ngokwengeziwe.
12. Ama-350 amagremu wephepha le-powder, ukuphrinta kombala we-CMYK +2 pantong, umbala webhokisi ebusweni ukhululekile futhi ukhanya, ukuze kuqinisekiswe ukufana kombala, umbala wepantong osetshenziswa kwezinye izindawo, ebusweni bamafutha we-matte, noma ngabe isicwebezelisi sephepha sokuqala noma ukuphrinta uyinki kuzoncishiswa, futhi kuvikelwe ibhokisi, ngokufakwa komkhiqizo imikhiqizo engaguquki.
13. Amagremu angama-300 ekhadi elimhlophe, ukuphrinta kombala we-CMYK +2 pantong, ukuhlangana okuhle, kufanele kuqinisekise umbala wengcezu ngayinye yomfaniswano webhokisi, indawo embozwe ngefilimu ethambile, izandla zizizwa zihluke ngokuphelele, i-UV yendawo igqamisa ubuntu bomkhiqizo, ngokufakwa kwebhamuza, okokugcina kufakwa emabhokisini.
Langaphambilini Ibhokisi lephepha lokunakekelwa kwesikhumba lifakwa ngebhokisi lohlobo lwencwadi le-PVC
Olandelayo: Imikhiqizo emisha yokuthengisa ethengiswa kabusha eyenziwe ngobuchwepheshe ephrintiwe eyi-gloss engenalutho ibhokisi lokupakisha